Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSierra Leone eziQhekezayo » Ubuncinci abantu abangama-99 basweleke kuqhushumbo eSierra Leone
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Safety • Iindaba zaseSierra Leone eziQhekezayo • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Novemba 6, 2021
Ubuncinci abantu abangama-99 basweleke kuqhushumbo eSierra Leone.
Uninzi lwamaxhoba kutyholwa ukuba bebezama ukuqokelela amafutha ezithuthi emva kwengozi eyenzeke endleleni.
Ugqabhuko-dubulo lwelori lubangela ilahleko enkulu yabantu kwikomkhulu laseSierra Leone eFreetown.
Uqhushumbo lwenzeke ngentseni yangoMgqibelo emva kokuba itanki ingquzule nenye isithuthi.
Kukho amaxhoba atshiswe kakubi angamashumi amathathu esibhedlele ekungalindelekanga ukuba aphile.
Ngokutsho kwamagosa ogcino-zidumbu kumbindi Sierra LeoneIkomkhulu, bangaphezulu kwe-90 abantu ababhubhileyo kuqhushumbo lwetanki yamafutha eFreetown ngale ntsasa.
Ugqabhuko-dubulo lwelori yaseFreetown yabulala abantu abaninzi, yaye abantu abayi-100 boyikwa ukuba bafile.
Uqhushumbo lwenzeke ngentseni yangoMgqibelo emva kokuba itanki yamafutha ingqubane nenye isithuthi kwaye abantu bahlanganisene bezokuqokelela amafutha avuzayo.
“Abahlali abazama ukuqokelela amafutha avuzayo elorini babengamaxhoba ogqabhuko-dubulo olwalandelayo,” utshilo uSodolophu waseFreetown uYvonne Aki-Sawyerr kwingxelo kuFacebook, kodwa kamva wayicima le ndawo.
Ibango lokuba abantu bebeyoqokelela amafutha lixhaswa yimifanekiso yabantu abachulumancile bemi kufutshane netanki, abanye bephethe iitoti, ekutyholwa ukuba zithathwe ngaphambi nje kogqabhuko-dubulo.
Amagosa aseFreetown anikela ingxelo yokuba indawo yogcino-zidumbu yedolophu ifumene izidumbu ezingama-91 emva kogqabhuko-dubulo ukuza kuthi ga ngoku. Intloko ye I-Arhente yoLawulo lweNtlekele yeSizwe (NDMA) yathi “yingozi embi, embi kakhulu.”
Kwiiyure ezisemva kwesehlo, inani lokufa elikhankanywe ngamagosa liye landa ngokuthe ngcembe. USekela Mongameli u-Mohamed Juldeh Jalloh uthe ubuncinci abantu abangama-92 babulawa emva kokundwendwela izibhedlele ezibini ezifumene amaxhoba.
Uhlaziyo lwamva lwayihlaziya yaya kutsho kuma-95. Usekela mphathiswa wezempilo kamva wabeka inani lababhubhileyo kuma-99.
Ngokwengxelo yabasebenzi basesibhedlele saseConnaught, angamashumi amathathu amaxhoba atshiswe ngokumasikizi ekungalindelekanga ukuba aphile.
Obekekileyo unozakuzaku uJunisa Precious Gbeteh Sallu Kallon - I-GGA ijoyina umanyano kumakhulu emiphefumlo elahlekileyo kuqhushumbo lwamafutha e-PMB eWellington kwicala elingasempuma kwi-Capital yam endiyithandayo-eFreetown, eSierra Leone.
Amagqabaza avela eSierra Leone
Yi #blackfriday kaJunisa Precious Gbeteh Sallu Kallon, buqu njengoko uJunisa Precious Sallu Kallon efunde ukuphulukana nepropati kunye nobomi babahlobo abasondeleyo kunye nezihlobo ezikude phakathi kwenqwaba yabantu abaphulukene nobomi ngenxa yogqabhuko-dubulo lwetanki ye-fuel engama-40 ubude.
Lusuku olundilisekileyo kunye nempelaveki ekufuneka yoyikise imbali yethu njengeFreetonian ngonaphakade. Njengoko ndifundile kwiBhunga lesiXeko saseFreetown sinabayi-92 abonzakeleyo (abangama-48 kwiSibhedlele saseConnaught, abayi-6 kwiSibhedlele saseChoitrams, abangama-20 kwiSibhedlele saseMkhosini abangama-34, abali-18 kwiSibhedlele esiNgxamisekileyo); siphulukene nemiphefumlo engama-94 eyongezelelweyo kwindawo yogcino-zidumbu yaseConnaught; ngokunokwenzeka 4 izidumbu zisekho kwindawo yoqhushumbo.
UJunisa Precious Sallu Kallon ufuna ukubulela impendulo engxamisekileyo yePolisa yethu yeMetropolitan kunye neSekela likaMeya kunye neBhunga lesiXeko saseFreetown, uRhulumente wonke waseSierra Leone ngokukodwa i-Arhente yoLawulo lweNtlekele yeSizwe - iSierra Leone (NDMA), okhokela impendulo.
UAlain St. Ange, umongameli weBhodi Yezokhenketho yaseAfrika wakhupha ingxelo esithi: “Sivelana kakhulu nabantu norhulumente waseSierra Leone ngale ntlekele yelizwe.”